उपचारका लागि अस्पताल गएकि अनुराधाको आँखा नै हराएपछि जे भयो! – Ramailo Sandesh
परिवारले डाक्टरहरुले महिलाको आँखा निकालेको आरोप लगाएको छ । अर्को तिर प्रहरी भन्छ कि मुसाले आँखा गायब गर्दिएको हो । यस घटनालाई गम्भीरताका साथ हेर्दै मुख्यमन्त्री अफिसले छानबिनको आदेश दिएका छन् ।
जानकारीका अनुसार ३१ डिसेम्बरमा गुलरिया थाना क्षेत्रको हरसेवकपुर टोला निवासी नितेश चौहानकी पत्नी अनुराधा कोठामा मृत भेटिइन् । त्यसपछि नितेशले आफ्नी पत्नी अनुराधा मृत भेटिएको भन्दै प्रहरीमा खबर पनि गरेका थिँए ।
अर्कोतिर यस घटनामा अनुराधाकी आमा बेला देवीले नितेश र उनका परिवारको विरुद्ध गुलरिया थानेमा दाईजोको विषयमा उजुरी दायर गराएकी छिन् । यो बीचमा अनुसन्धान भइरहेको थियो ।
तर अचानक मृतक महिलाको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । उक्त तस्बिरमा ति महिलाको दाहिने आँखा हराइरहेको देखिएको थियो । एएसपी क्याम्पियरगञ्ज राहुल भाटीले भने कि महिलाको आँखा मोर्चामा मुसाले लिएको हुनुपर्छ ।
उक्त घटना पछि मृतक महिलाको परिवारले उक्त घटनाको छानबिन गर्न सहरका विधायक राधामोहन दास अग्रवाललाई भेटेको थियो । विधायकले यस कुरालाई गम्भीर रुपमा लिए र गुलरिहा प्रहरी चौकीका रवि राईसँग कुरा गरेका थिँए ।
मृतकलाई मोर्चरीमा राख्नु अघि बनाइएको फोटो र भिडियो पनि मागेका छन् । प्रहरीले सबै प्रमाण शहरका विधायकलाई दिएको जानकारी दिएको छ ।
ति विधायकले फोटो र भिडियो हेरे जसमा महिलाको आँखा सुरक्षित देखिएको थियो । अर्कोतर्फ, परिवारले डाक्टरले महिलाको आँखा निकालेको आरोप लगाएका छन ।
मुख्यमन्त्री कार्यलयका डा. सुधाकर पाण्डेले मोर्चरीबाट महिलाको आँखा हराउने कुरा गम्भीर भएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार मुद्दाको छानबिन हुनेछ ।